यस्ता छन्, घरपालुवा जनावरका फाईदा - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
यस्ता छन्, घरपालुवा जनावरका फाईदा
मेरो लाइफस्टाइल || 18 February, 2021
कुकुरलाई सबैभन्दा बफादार घरपालुवा जनावर मानिन्छ । कुकुरको सुँघ्ने र सुन्ने क्षमता अत्यन्त तिक्ष्ण हुन्छ । सुरक्षाका लागी पनि धेरैले घरमा कुकुर पाल्दै आएकाछन् । अहिले कुकुर शौख र रहरले गर्दा धेरै मानिसहरूले पाल्दै आएका छन् ।
कुकुर पाल्नु केवल आफ्नो स्टाटसको सिम्बोल मात्र होइन । अहिले खुशी रहन, स्वस्थ रहन, उर्जावान हुन पनि घरमा कुकुर पाल्ने थालिएको छ ।
घरमा पालिने घरपालुवा जनावर र मानिसको बिचको सम्बन्ध कस्तो हुनु पर्छ ? घरपालुवा जनावर पाल्दा के के फाईदा हुन्छन् भन्ने विषयमा डा. शरदसिंह यादव भन्नुहुन्छ – घरमा घरपालुवा जनावर भएको मानिस र घरपालुवा जनावर नभएको मानिसहरुको व्यवहार छुटै हुन्छ । घरपालुवा जनावरको रुपमा कुकुर पाल्दा के कस्तो किसिमको फाइदा हुन्छ भन्ने बिषयमा डा. यादवले दिनु भएको जानकारी ।
घरमा कुकुर पाल्दा व्यायमका लागि प्रेरणा मिल्छ । जब तपाई कुकुरलाई बिहान बाहिर डुलाउन लैजानुहुन्छ तपाईले बिहानको ताजा र सफा हावा प्राप्त गर्नुका साथै रक्त सञ्चार पनि राम्रो बनाउछ । कुकुरलाई दैनिक डुलाउन पैदल हिड्दा व्यायम हुन्छ र स्वास्थ्यमा पनि सुधार आउँछ ।
कुकुरलाई लिएर गरिएको विभिन्न अनुसन्धान अनुसार घरपालुवा कुकुरले तनाव कम गर्न मद्दत गर्छ । कुकुरसँग बस्ने, खेल्ने तथा प्रत्येक दिन कुकुरलाई हेर्नाले पनि मानसिक तनाव कम हुदैं जान्छ । घरमा भएका जेष्ठ नागरिक र साना बालबालिकाहरु कुकुरसँग धेरै समय बिताउन मन पराउँछन् । कुकुरसँग खेल्ने, बोल्ने गर्नाले स्ट्रेस हर्मन कम हुन्छ ।
सामाजिक जिवन सुध्रन्छ
कुकुरलाई बिहानपख डुलाउनाले एक्सरसाइज मात्र हुँदैन । सामाजिक जिवनमा पनि सुधार आँउछ । आजभोलि शहरमा मानिसहरुसँग समय निकै कम हुन्छ । व्यस्त जिवनशैलिका कारण छिमेकसँग चिनजान र बोलचाल सम्म पनि हुँदैन । बिहानी पख कुकुरसँग हिड्ने क्रममा अरु कुकुरलाई डुलाउन हिडेका व्यक्तिहरुसँग पनि भेटघाट, बोलचाल हुन्छ जसले सामाजिक दुरी घटाएर सामाजिक जिवन सुध्रदै जान्छ ।
सुरक्षित महसुस हुन्छ
घरको सुरक्षाको लागि कुकुर भरपर्दो जनावर मानिन्छ । यसले घरलाई सुरक्षा प्रदान गर्छ । कुकुरको सुँघ्ने र सुन्ने शक्ति अत्यन्त तिक्ष्ण हुनुको साथै कुकुरमा विशेष प्रकारको संवेदनशिलता हुन्छ जसकारण चोर, बदमासको व्यवहारलाई चिन्छ र भुक्छ । घरमा पालिएको कुकुरले दिउँसको साथै रातको समयमा पनि घरको सुरक्षा गर्दा मानिसहरु आनन्दले निदाउन सक्छन् । घरमा कुकुर पालिएको छ भने मानिसहरु निश्चित भएर घर बाहिर जान सक्छन् र सुरक्षित महसुस गर्छन् ।
विभिन्न अध्ययनले जनाए अनुसार कुकुर पाल्ने परिवारमा मुटु सम्बन्धि रोग लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ । कुकुरसँग खेल्दा र कुकुरलाई डोर्याएर हिँड्दा रक्तचाप घटाउन सहयोग गर्छ । कुकुरलाई घरबाहिर लिएर जाँदा मानिसको एक्सरसाइज पनि हुन्छ । यसले गर्दा मुटु सम्बन्धि रोग लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ ।